Morontsiraka Katalana Niharan’ny Fihovitry Ny Tany In-300 · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraJoan Antoni Guerrero Vall
Voadika ny 29 Oktobra 2013 11:23 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Français, polski, Català
Sary avy amin'ny tranonkalam-pampiroboroboana ny Tetikasa Castor.
Horohorontany madinika maherin'ny 300 no namely ny faritra avaratr'i Valence sy tao atsimon'i Catalogne tamin'ny herinandro lasa. Mety hisy ifandraisany amin'ny fanindronana etona fandrehitra voajanahary hotehirizina ambanin'ny tany nataon'ilay tetikasa Castor [en], orinasan'etona fandrehitra voajanahary miorina manamorontsiraka an'i Mediteranea ao amin'ireo faritra ireo no anton'izany.
Naaton'ny governemanta [es] ny fanindronana etona efa natao herinandro vitsy lasa izay, mandra-pisian'ny tatitra ara-teknika manazava tsara ny fandehan-draharaha. Nolavin'ny orinasa misahana ny tetikasa ho tsy avy amin'ny fanindronana no iavian'ny horohorontany, kanefa nilaza ireo tompon'andraikitra eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana sy ny politika fa misy ifandraisany mivantana izany ka nahatonga ireo fikambanana sy mponina mpifanolo-bodirindrina hanao fanentanana hanohitra ny tetikasa amin'ny alalan'ny fampiasana teny ifankafantarana #projectecastor ao amin'ny Twitter. Hetsika mifandray [ca] amin'ny fahazarana manindrona izay teknikam-pamotsorana (“fracking”) izay miteraka adihevitra manerantany.
Mahazo tombony noho ny fisian'ilay fatson-tsolitany efa ritra ny tetikasa, izay mirefy 1750 m ny halaliny, mba hitehirizana etona betsaka hahafahana manome fahafaham-po ny iray ampahatelon'ny filàn'ny espaniola. Nomena hotrandrahan'ny orinasa Unión Temporal de Empresasity tamin'ny alalan'ny fifanekena ara-panjakana ny fisahanana ity tetikasa mitentina 1300 tapitrisa Euro ity, izay notsinjarainy tamin'ny orinasa kanadiana CLP (30%) sy espaniola ACS (70 %), orinasam-pananganana fotodrafitrasa tantanin'i Florentino Pérez, filohan'ny ekipa baolina kitra Real Madrid.
Raha miha-mahery vaika ny hasosorana manoloana ilay tetikasa taorian'ny horohorontany izay mety misy ifandraisany amin'ny tetikasa, efa ela ny hetsika ara-tontolo iainana sy ara-politika sasany no nampahafantatra izay loza mety aterak'ity orinasa ity. Nanamarika [ca] tao amin'ny bilaoginy ny solombavambahoaka eoropeana mpiaro ny tontolo iainana Raúl Romeva, nampatsiahy fa tsy vao omaly ny nisian'ny ahiahy mikasika ity orinasan'etona fandrehitra ity:
Potser hi ha qui s’ha sorprès amb les recents notícies relacionades amb els moviments sísmics que han tingut lloc a la costa, davant de Vinaròs, relacionats amb la planta d'emmagatzematge de gas, més coneguda com a Projecte Castor. No obstant, cal recordar que fa molt de temps que molta gent ens ve advertint dels riscos vinculats a aquesta mena d’explotacions, i que han fet arribar a les diferents institucions les seves preocupacions.
Mety marina fa misy ireo gaga tamin'ny vaovao vao haingana momba ireo horohorontany manamorona ny ranomasina, akaikin'i Vinaròs, izay misy ifandraisany aminà tobi-pitahirizana etona fandrehitra, fantatra amin'ny anarana hoe tetikasa Castor. Tsara ihany indraindray ny mampahatsiahy fa efa maro ireo nilaza hatry ny ela mikasika ny loza mety aterak'ity tetikasa ity ary efa nanambara ny ahiahiny tamin'ireo andrim-panjakana isan-karazany izy ireo.
Tao amin'ny Twitter, Juan López de Uralde, mpikambana ao amin'ny hetsika politika sy sosialy EQUO [es], nampitandrina momba ity karazana tetikasa ity ary nitsikera ny politikan'ny angovo espaniola:
Atentos a #Castor en la costa mediterránea. Pone de manifiesto la absurda política energética española: apoyo al gas y castigo a renovables.
Mitandrema amin'ilay tetikasa #Castor ao amoron-dranomasina mediteraneana. Mampiseho ny hadalàn'ny politikan'ny angovo espaniola izany: fanohanana ny etona fandrehitra sy fanasaziana melohana ny angovo azo havaozina.
Nitarika ireo ben'ny tanàna sasany handray fanapaha-kevitra hanohitra ny tetikasa ny zava-misy ao amin'ireo tanàna voakasiky ny horohorontany, araka ny filazan'ny Plataforma pel Sénia [ca/es]:
Marcelino Domingo, alcalde del PP de Benicarló, anuncia al seu perfil de FB q demanarà la paralització i desmantellament del #ProjecteCastor
Nanambara tao amin'ny Facebook i Marcelino Domingo, ben'ny tanànan'i Benicarló ao amin'ny antokom-bahoaka fa andeha hitaky ny fampitsaharana sy ny fanafoanana ny tetikasa izy. #ProjecteCastor
Taminà resadresaka [ca] tao amin'ny vavahadin-tserasera Vilaweb, Lluc Ulldemolins, mpikambana ao amin'ny vondrona mpiaro ny tany ao Sènia, nizara ny tahony manoloana ny ahiahy mikasika ny antony mahatonga ny horohorontany, izay mbola mitohy na dia nanome antoka aza ny governemanta fa efa naato ny fanindronana etona:
Eny, nilaza ny orinasa fa efa najanona ny fanindronana etona, saingy mihamahery vaika ny hovitrovitry ny tany. Ary mbola mampiahiahy. Raha tena resy lahatra isika fa avy amin'ny fanindronana etona no niavian'ireo hovitrovitra, efa haraha-maso ny antony. Saingy raha tena marina tokoa fa najanon'ny orinasa ny asany kanefa mbola mitohy ny hovitrovitry ny tany, midika izany fa sarotsarotra kokoa tsy araka ny heverintsika ny zava-misy. Iza no tokony hinoantsika? Aleontsika ilay orinasa no mandainga, tsy hoe mba hanomezan-tsiny azy, fa farafaharatsiny mba fantatsika ny antony mahatonga ny hovitrovitry ny tany.
Satria mitombo eo amin'ireo vahoaka ny fahatezerana sy ny tahotra, araka ireo vaovao [es] nivoaka an-gazety, fantatra fa toa efa nandray fepetra ny orinasa amin'ny fialana an-daharana amin'ny fitrandrahana ary nangataka onitra. Manan-jo hisintaka amin'ny fifanekena amin'ny Fanjakana izy ary mahazo ny sandam-bidy amin'ny alalan'ny onitra satria ny minisiteran'ny Indostria no niavian'ny tetikasa.